All Weather Wicker Garden Modular Sofa Ratan Base Assembly Fire Pit Table, Furniture from China on TopChinaSupplier.com
Tsvaga Zvigadzirwa & Vanopa
Post Sourcing Chikumbiro
Sourcing Mhinduro & Sevhisi
Anotsigira Audit Chirevo
Gadzira Zvigadzirwa Zvako
Kutaurirana & Chats
MuSainzi Ino PaPamusoroChinaSupplier
Foshan Tanfly Fenicha Co, Ltd
Mugadziri / Fekitori
Kunze Ifenicha, Swing Chair, Kunze Sofa, Kudya Set, Chaise Lounge, Kunze Umbrella
R & D Kugona:
OEM, ODM, Imene Brand, Vamwe
Yegore Rinobuda Inokosha:
Mamiriyoni mashanu - Miriyoni gumi USD
Shanyira Fekitori Yangu
Kambani yedu, iri muFoshan, Guangdong Province, inyanzvi yekugadzira uye inovimbika inopa zvigadzirwa zvekunze. Kambani yedu inonyanya kutarisa rattan fenicha, rattan sofa, modular saka ...
Bata Mutengesi Taura neMutengesi Supporter Favorites
Swing Chairs Moto Gomba Tafura Kunze kweSofas Adirondack Sachigaro Rope Ficha Chaise Lounge Kudya Matinji Kunze Umbrella Maruva Pot chishongedzo
Company Profile Kutengesa Kugona Kambani Show
Supporter Mapeji fenicha Zvese Mamiriro ekunze Wicker Girazi Modular Sofa Ratan Base Assembly Fire Pit Tafura
Zvese Mamiriro ekunze Wicker Girazi Modular Sofa Ratan Base Assembly Fire Pit Tafura
Iva Nhamba Yepamusoro
Min. Order / Reference FOB Mutengo
1 Sets US $ 650.00 / Sets
OEM, ODM, Zvimwe
Contact Now Kumbira Muenzaniso Yakagadzirirwa Chikumbiro
Favorites Favorites mugove
Dhawunirodha Chigadzirwa Catalog
Kunze Pool Furniture Swing Pool Sachiva Pool Tab
US $ 260.00 / Sets
Yakamira Zai Yakarembera Bhora Sachigaro Mukati meKufamba Han
US $ 286.00 / Zvimedu
Wholesale Kunze Patio Yemazuva Bar Bar Furniture Bar
US $ 320.00 / Sets
Kunze Patio Swing Sachigaro Rattan wicker Egg Shap
US $ 108.61 / Sets
Kusvika kutsva Whosale Patio White Sofa Aluminium Ga
US $ 366.00 / Sets
Mutengi Mubvunzo & Mhinduro
Bvunza chimwe chinhu kune rumwe ruzivo
Uyai nodziye uye kudziyana kwenzvimbo yemotoe kune patio yako, dhiketi kana kumashure neiyi Endless TANFLY® propane gasi moto gomba tafura. Iri kuratidza choto chakashongedzwa, gomba remoto iri rakazara netafura yakafananidzwa wicker tafura base, ichichiita chinokwezva chepakati chenzvimbo yako yekunze yekugara.
(Cherekedza: Girazi remhepo rakapfava harina kuiswa mune yakatarwa)
Yapedza ne 55,000 BTU simbi isina kupisa simbi uye chakabatanidzwa kuvesa, unogona kunakidzwa nechero ambiance yemhando yepamusoro moto pasina nyonganiso yekutarisa madota. Kuti ushandise chigadzirwa zvakachengeteka, ichi chikamu chinouyawo nevhavha inodzivirira.
zvinhu Aluminium frame, Pe rattan, Yakadzikama girazi yepamusoro, Nhema Crystal Girazi Dombo
Yese Set Fire gomba tafura * 1 + refu pasofa-kurudyi ruoko * 2 + refu pasofa-kuruboshwe ruoko * 1
Specification Table:112*82*65cm Sofa:145*80*63cm
nhuri Kugara uchitumira kunze kwenyika makatoni
Kutsvaga simba 12 pcs / 20GP, 29 pcs / 40HQ
dhirivahari 25 ~ Mazuva makumi matatu mushure mekugamuchira dhipoziti ye30 "HQ
1. kurongeka nemidziyo yakazara: 12pcs / 20GP, 29pcs / 40HQ
2. Isu tinogamuchirawo sampuro yekuraira kana iwe ukainhonga kubva kufekitori yedu.
Where kushandiswa Kunze (Bindu, Patio, Restaurant, Hotera, Villa, Gungwa, Resort, Yakavanzika Nyika, Yadhi, Bhawa, Dziva rekushambira, Bistro, Lawn, Balcony, Open open, Seaside, Riverside, Park, Street, Barbecue, Scenic nzvimbo yevashanyi, Terrace , Square, Zviitiko, Kondomu, Zvekutengesa, zvekugara, Kunze kwenzvimbo yekutandarira) nedzimwe nzvimbo dzekuzorora.
Foshan Tanfly Fenicha Co, Ltd inonyanya kugadzira zvigadzirwa zvekunze zvemakore. Isu tinonyanya kutarisa pane akasiyana fenicha ekunze, senge imba yechigaro, sofa rekunze etc.Tinakidze runako rwemamiriro ekunze edu ese ekunze ekunze. Isu tichagadzira fenicha yezvaunoda nekuti iwe important kwatiri.
* Chikero: Makore manomwe'experience, vanopfuura zana vashandi uye 7 metres metres fekitori, 100 mativi metres showroom uye hofisi.
* Unhu: SGS yakatenderwa.
* Kugona: anopfuura 300 * 40HQ containers yemidziyo kukwanisa kwegore.
* Dhirivhari: Inoshanda OA odhi system inova nechokwadi chekutakura mazuva 15-25.
* Mushure mekutengesa: Zvese zvichemo zvinobata mukati memazuva 1-3.
* R & D: 4 munhu R & D timu inotarisa pane zvekunze fenicha, ingangoita imwe nyowani catalouge pagore yakaburitswa.
* Imwe kumira kwekunze fenicha mhinduro: TANFLY inopa yakakwana kunze fenicha mhinduro.If ukada chero imwe nzvimbo yokunze iyo yatisingakwanise kuburitsa, tinogona kubatsira kunzvera kwevatengi vedu.
Isu tinofara kunzwa kubvunza kwako munguva pfupi. Ndatenda kune dropping pawebhusaiti yedu.
1. isu tine International busniess department, inopa profional inopindura munguva;
2. isu tine OEM sevhisi, inogona kupa pfupi quote based pane zvinodiwa nevatengi;
3. isu tine vanhu vemufekitori vanoshanda pamwe nekutengesa, vachitigonesa kupindura nekugadzirisa nyaya nekukurumidza uye kudzikisira, sekutumira mamwe ma sampuli, kutora HD mapikicha, nezvimwe;
1. isu tine profional after-sale service timu, ine chinangwa chekutarisana nematambudziko ese anogona kune edu mutengi soodendere uye nemazvo, zvinosanganisira kuripirwa uye kudzorerwa, nezvimwe;
2. isu tine kutengesa kunogara kutumira edu manyowani mhando kune vatengi vedu, uye zvakare zviratidzo zvitsva zvakaonekwa mumisika yavo based pane yedu data;
3. isu tinotarisa zvakanyanya kune zvigadzirwa zvemhando uye bhizinesi mamiriro evatengi vedu, uye zvaizovabatsira kuita busniess yavo zvakanaka.
Q1: Ndeipi mhando yemitemo yekubhadhara inogamuchirwa?
A: T / T (Telegraphic Transfer)B: Western UnionC: KubhadharaD: MariGramQ2: Izvo zvinhu zvinogona kuendeswa riinhi mushure mekuraira kuiswa?
Zvichienderana nezvigadzirwa zvako zvakagadzirirwa, zvinogona kubva pamazuva gumi kusvika pamazuva makumi matatu,Zvigadzirwa zvakajairika, tinogona kuendesa ku once sezvo isu tine stock, yakawanda yezvinhu yatinogona kuburitsa mumazuva gumi nemashanu ekushanda! iyo chaiyo yekuendesa nguva ichave yakataurwa mu proforma invoice once Order iri / confirm / ied.Q3: Zvinotora nguva yakareba sei vatengi vasati vagamuchira zvinhu?
Kunze kwekugadzira nguva mentioned Pamusoro, kazhinji zvinotora mazuva 10-25 akakwana ekutakura kuenda kune chero chinhambwe chinotenderera kupota nyika. inotsamira pachiteshi chako uye isu tichakusarudza nzira yekukurumidza yekutumira iwe kuti uve nechokwadi chekuwana zvinhu pakutanga!Q4: Ko zvinhu zvinoratidzwa pawebsite zvakagadzirira kuburitsa kana oda yaiswa?
Zvizhinji zvezvinhu zvinodiwa kuti zvigadzirwe once Order iri / confirm / ied.Stock zvinhu zvinogona kunge zviripo nekuda kwemwaka wakasiyana, ndapota contact vashandi vedu kuti uwane ruzivo.Q5: Ndingaite sei kuti ndiwane quotation uye kuita odha?
Ingozivisa chete vashandi vedu zvinhu zvehuwandu (kana link) yezvinhu zvaunofarira uye isu tichagadzirira ruzivo rwekudzokorora iwe. Proforma invoice ichapihwa once kurongeka kuri cokusimbiswa uye kugadzirwa kuchatangwa once kumberi kubhadharwa kunopedzwa.
Tumira shoko rako kune uyu mutengesi
Pinda pakati pegumi kusvika zviuru chiuru.
Izvi hazvisi izvo zvauri kutsvaga?  Tumira Chikumbiro cheSourcing Zvino
Vanhu vaiona izvi vaitaridzwawo
Yakasimba Swing Seat 2 Seat Gadheni Inorembera Rattan
Kunze Kwekunze Fenicha Kuzviputira Double Swing C
Bindu Rattan Wicker Ruviri Seat Hanging Swing E
US $ 145.00 / Peece
Kunze 2 Seast Bindu Kushambadzira Chigaro Rattan Hangi
Rattan Kunze Patio Wicker Anorembera Chigaro Swing
US $ 80.00 / Peece
Tsvaga Zvimwe Zvigadzirwa Nemhando
Moto Gomba Tafura
Contact Now Yakagadzirirwa Chikumbiro
Hot Products China Zvigadzirwa China Vagadziri / Suppliers China Wholesale Product Index Mobile Nzvimbo
Copyright © 2008-2021 Topchinasupplier.com Kodzero dzose dzakachengetedzwa.